သင်ရွှေ Galaxy Note5ကိုဝယ်မလား။ | Androidsis
သင်ရွှေ Galaxy Note5ကိုဝယ်မလား။
Samsung ၏ terminal အသစ်ဖြစ်သော Galaxy Note5ကိုမကြာသေးမီကသြဂုတ်လ ၂၀ ရက်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးမကြာမီကပင်စျေးကွက်အများအပြားတွင်ရောင်းချခဲ့သည်။ ဤ terminal ၏ဒီဇိုင်းသည်အခြားမျိုးဆက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပြောင်းလဲသွားပြီး၊ ၎င်း၏ယခင်များထက် ပို၍ ကြော့ရှင်း။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။
သို့သော်ကဏ္ sector အတွင်းရှိကုမ္ပဏီများသည်ပိုမိုသီးသန့်ထိတွေ့ဆက်ဆံလိုသောကုမ္ပဏီများရှိပြီး၎င်းသည်၎င်း၏ခေတ်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အတိုင်းဖြစ်သည် အသစ် Galaxy S6 နှင့် S6 Edgeအဆိုပါ ရွှေ Galaxy Note5ပြည့်စုံလာတယ်.
တောင်ကိုရီးယား၏အထင်ကရအဆောက်အအုံသစ်ကိုရေချိုးရန်အကြံသည်အာရှနိုင်ငံမှအိမ်နီးချင်းကုမ္ပဏီ၊ အထူးသဖြင့်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှဖြစ်သည်။ Karalux ဟုခေါ်သည့်ကုမ္ပဏီနှင့်ဂုဏ်သတင်းကြီးသောဆိပ်ကမ်းများတွင်ဤပြုပြင်မှုများပြုလုပ်ရန်ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ကတင်ပြခဲ့သည် ၂၄ ကာရက်ရှိရွှေရောင် Galaxy Note5။
Karalux အင်ဂျင်နီယာများသည် terminal ကို ဦး စွာဖြုတ်တပ်ပြီးနောက်ရွှေပြားကိုပြီးစီးရန်အဆင့် ၁၀ ဆင့်အထိပြုလုပ်ရသည်။ ဒီကုမ္ပဏီရဲ့အဆိုအရသူတို့က Note 10 အသစ်ရဲ့ဘောင်ရဲ့အလွိုင်းဟာ Galaxy S5, S60 Edge နဲ့အခြား Galaxy မျိုးဆက်တွေရဲ့ဘောင်တွေထက် ၆၀% ပိုအားကောင်းတယ်လို့ဆိုတယ်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဖုန်း၏ဘေးဘက်နှင့်နောက်ကျောများကို ၀ တ်ဆင်ခြင်းအပြင်ရွှေ၊ ကင်မရာအစွန်း၊ သတ္တုအနားနှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာပေါ်တွင်ရွှေကိုတင်ခဲ့သည်။ Karalux အတွက်မူဗီယက်နမ်ဒေါင် ၈ သန်းကုန်ကျပြီးပြောင်းလဲရန်ယူရို ၃၆၀ ခန့်ကုန်ကျသော်လည်းကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်းပစ္စည်းကိုယူရို ၁,၃၀၀ ဖြင့်ပြောင်းလဲပစ်သည်။ အထက်ပါရုပ်ပုံများနှင့်အထက်ပါဗီဒီယိုများတွင်သင်မြင်နိုင်သည့်အတိုင်း terminal သည်အလွန်ကောင်းမွန်လှသည်။
ပြီးတော့သင်, မင်းဒါကိုဘယ်လိုထင်သလဲ ?, သင်ရွှေ Galaxy Note5ကိုဝယ်မလား ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » သင်ရွှေ Galaxy Note5ကိုဝယ်မလား။
နောက်ပိုင်းတွင် S-pen သည်အတွင်းပိုင်းတွင်ကျန်ရှိနေပြီး XD လုပ်ဆောင်ချက်များကို #no ချိုးဖောက်သည်
ကျွန်ုပ်တို့ Certifi-Gate မှကျွန်ုပ်တို့ထိခိုက်မှုရှိမရှိမည်သို့သိနိုင်မည်နည်း
Moto X Play တွင် Motorola သည် gyroscope ကိုမေ့သွားသည်